सानिमा लाईफको शेयर मूल्य ७ सय माथि पुग्यो,मंगलबार पनि सर्किट
काठमाण्डौ । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य मंगलबार पनि सर्किट लागेको छ । कारोबार सुरु भएको करिव २ साताको अवधिमा कम्पनीको शेयर मूल्य ७ सय २८ रुपैयाँ पुगेको छ । यस अघिका दिनमा भन्दा आज यो कम्पनीको शेयर खरिद विक्री चाप समेत बढेको छ भने शेयर माग पनि केहि घटेको देखिएको छ । यो समा...}
सानिमा लाइफको शेयर दोस्रो बजारमा आउँदै, कतिमा होला कारोबार ?
काठमाडौं–सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ पश्चात दोश्रो बजारमा शेयर किनबेच हुँदै छ । दोस्रो बजारमा आए पछि पहिलो शेयर कारोवार कतिमा होला ? आम लगानीकर्तालाई चासो छ । पहिलो कारोवार न्युनतम प्रतिकित्ता १०३ रुपैयाँ १७ पैसा र अधिकतम ३०९ रुपैयाँ ५१ पैसा सम्म रेञ्ज पाउने अनुमान छ । सानिमा लाइफ...}
रिलायवल इन्स्योरेन्सको सवा अर्वको आईपीओ आउँदै, प्रिमियम मूल्य कति ?
काठमाडौं– रिलायवल लाइफ इन्स्यारेन्स कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सवा अर्ब रुपैयाँको आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनी १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ११२ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य जोडेर सर्वसाधारणबाट प्रतिकित्ता २१२ रुपैयाँ लिने ग...}
साउन २० गते ६० करोडको आईपीओ निष्कासन हुने
कठमाडौं–पुँजी बजारमा एक पछि अर्को कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरिरहेका छन् । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणलाई साउन २० गतेदेखि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता आईपीओ साउन २० गतेदेखि बिक्री खुला गर्ने भएको हो ।...}
१० अर्ब रुपैयाँको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सिइओ विदेशी
काठमाडौं–बीमा समितिले केही समय अघि संचालन अनुमति दिएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) विदेशबाट ल्याउने भएको छ । रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको बजार विदेश पनि भएकाले सिइओ सहित उच्च व्यवस्थापनका लागि तीन जना जनशक्ति विदेशबाट ल्याउन लागेको हो । नेपालमा रिइन्स्योरेन्स...}